के गर्भवती महिलालाई कोरोना संक्रमण हुँदा बच्चामा पनि संक्रमण हुन्छ ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
घर स्वास्थ्य के गर्भवती महिलालाई कोरोना संक्रमण हुँदा बच्चामा पनि संक्रमण हुन्छ ?
२७ बैशाख २०७८, सोमबार १८:२०
कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरले मानिसहरु पुनः समस्यामा परेका छन् । संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । पहिलो कोरोना संक्रमणको लहरमा संक्रमित हुने सम्भावना कम रहेका व्यक्तिहरुमा पनि दोस्रो लहरको संक्रमणमा संक्रमित हुनेको संख्या बढेको छ । नवजात शिशुहरू पनि कोरोना संक्रमित भएका छन् ।
गर्भवती महिलामा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा कमि हुन्छ । गर्भ रहेको अवस्थामा शरीरले २ व्यक्तिका लागि पोषण दिने काम गरिरहेको छ । त्यसैले यस्तो समयमा कुनै पनि रोगले छिट्टो आक्रमण गर्न सक्छ । त्यसैले गर्भवती महिलामा कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । दोस्रो लहरमा विश्वभर युवा पुस्ता संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, गर्भवती महिलाहरु पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि मेडिकल रिपोर्टले आमाको पेटमा रहेको शिशुमा संक्रमण भएको पत्ता लगाएको छैन । तर, कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाहरुको शरीरमा असर पार्ने र उनको शिशुमा पनि गम्भीर असर पार्छ । शिशु जन्मिएपछि भने संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । गर्भवती महिलाहरूमा संक्रमणका कारण छिट्टै शिशु जन्मिएका उदाहरणहरु भने भेटिएका छन् । Ratopati- एजेन्सी